GROUP A: Manchester United iyo Basel Oo Iska Xaadiriyey Wareegga 16-ka
Abdiwahab Ahmed 06/12/2017
Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa kaalinta koowaad kaga soo baxday groupka A, halkaas oo ay ka urursatay 15 dhibcood.
Manchester United oo garoonkeeda Old Trafford ku martigelisay kooxda ka dhisan waddanka Ruushka ee CSKA Moscow ayey guushu ku raacday 2-1, iyadoo daqiiqadihii 65aad iyo 66aad heshay labada goo loo ay u kala dhaliyeen Lukaku iyo Rashford.
CSKA Moscow oo marti ahayd ayaa goolka ku horreysay, waxaanay heshay wakhtigii dheeeraadka ahaa ee lagu daray qaybta koowaad.
Ciyaartan oo uu dhexdhexaadinayey garsooraha Talyaaniga ah ee Gianluca Rocchi ayaa waxa uu tababare Mourinho afka hore istaajiyey weeraryahannadiisa da’da yar ee Rashford iyo Lukaku oo kaalmo ka helayey Juan Mata, Paul Pogba, Herrera, Valencia Iyo Luka Shaw oo dhexda wada taagnaa, halka difaacana ay iska garab ciyaareen Lindeloef, Smalling iyo Blind.
Daqiiqaddii 45aad ee dhamaadka qaybta hore ayay CSKA Moscow heshay niyad ay qaybta dambe ugu dagaallantay inay dhashato laba gool oo kale si ay uga takhalusto Manchester United oo ciyaartoodii hore kaga adkaatay 4-1, waxaana goolka rajada geliyey u dhaliyey CSKA laacibka Alan Dzagoev oo kaalmo ka helay Vitinho.
Daqiiqaddii 65aad ayay Manchester United dib usoo noolaatay, waxaana goolka barbar dhaca u dhaliyyey Romelu Lukaku, kaas oo kubbad uu ka helay Paul Pogba ku hubsaday shabaqa CSKA. Daqiiqad kaddib oo ahayd 66aad ayaa ay Manchester United hoggaanka la wareegtay markaas oo Rashford oo kubbad ka helay Mata uu goolka labaad u saxeexay kooxdiisa.
Mourinho ayaa markii uu labada gool helay, waxa uu si degdeg ah u beddalay Andre Herrera oo khadka dhexe ka caawinayey Pogba iyo Mata, waxaana soo galay ciyaarta Scott McTominay.
Guushan ayaa Manchester United siisay inay kaalinta koowaad kaga soo baxdo hormada A, iyadoo heshay 15 dhibcood, waxaana kaalinta labaad kusoo baxday FC Basel oo heshay 12 dhibcood, kulankeedii u dambeeyeyna 2-0 ku xasuuqday Benfica.
Kaalinta saddexaad oo tegaysa Europa League, waxa ku baxday CSKA Moscow oo 9 dhibcood haysata halka ay Benfica la hoyatay dhibco la’aan.
Ramos Oo Amaanay Difaacii Ay Kala Horyimaadeen Bayern, Guushana Arintaas u Nisbeeyey
Eric Bailly Oo Noqday Ciyaaryahankii U Horeeyey ee Mourinho Keeno Manchester Utd
Real Madrid Oo Dooneysa Vidal, Biglia, Pogba iyo De Gea
Buffon, Ramos, Modrić iyo Ronaldo oo ku guuleystay Biladihii Yurub
Goolkii Ruxay Bernabeu Oo Murugo Ku Abuuray Xidigii Dhaliyey ee Morata
Calaacalkii U Dambeeyey Ee Zidane Iyo Khilaafka Ronaldo